कोरोना भन्दा घातक मानिएको ‘ब्ल्याक फंगस’ के हो ? - समय-समाचार
कोरोना भन्दा घातक मानिएको ‘ब्ल्याक फंगस’ के हो ?
समय-समाचार सोमबार, २०७८ जेठ १० गते, १५:१७ मा प्रकाशित
म्युकरमायकोसिस पनि भनिने यो संक्रमण विश्वमै निकै दुर्लभ मानिन्छ। यो ढुसीका कारण हुन्छ। माटो, बिरुवा, मल र सडेको फलफूल तथा सागसब्जीमा यस्तो ढुसी हुनसक्छ। स्वस्थ मानिसको नाकमै पनि यो फंगस रहेको हुनसक्छ।
यो फंगसले अनुहारको हड्डी, दिमाग र फोक्सोमा असर गर्छ। डायबिटीज र एचआइभी÷एड्स लगायत रोग लागेकालाई संक्रमण भए मृत्युदर अधिक हुनसक्छ।
नाक बन्द हुनु, नाकबाट रगत या कालो पदार्थ निस्कनु, आँखा चिलाउनु र पीडा हुनु, आँखाको परेली उठाउन नसक्नु, धमिलो देख्नु र अन्त्यमा अन्धोपन हुनेजस्ता समस्या ब्ल्याक फंगसले निम्त्याउने गर्छ।
ब्ल्याक फंगसबाट संक्रमित भई खराब अवस्थामा पुगेपनि मात्रै मानिसहरू उपचार प्रकृयामा आउँदा बचाउन गाह्रो हुने गरेको भारतका चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
यस्तो स्थितिमा दिमागसम्म संक्रमण फैलन नदिन त्यहाँ संक्रमितको आँखा नै निकाल्न परिरहेको छ। ब्ल्यांक फंगस रोक्न अहिलेसम्म फेला परेको एकमात्र औषधी एन्टी फंगल इन्जेक्सन नै हो।
यो इन्जेक्सनको एक डोजको मूल्य नै करिब ३५ सय भारु पर्छ। यो इन्जेक्सन हरेक ८ हप्तामा एकपटक लगाउनुपर्ने चिकित्सकले बताएका छन् ।